ज्योतिष विज्ञान र जन्म कुण्डलीको सामान्य परिचय | Hamro Patro
ज्योतिष के हो ?
हरिॐ ! समय विज्ञान हो ज्योतिष । तेस्रो नेत्र (Third Eye) हो ज्योतिष । ज्योति अर्थात् उज्यालो प्रकाश नै ज्योतिष शब्दको अर्थ हो । उज्यालो प्रकाश बिना जीवन सम्भव हुँदैन । आँखा विनाको जीवन अन्धकारमय हुन्छ । सूर्य भन्नु आँखा भन्नु या ज्योतिष भन्नु यी सबै समानार्थी शब्द हुन । सूर्यको प्रकाश ( या बिजुली आदि कृत्रिम प्रकाश ) मा मात्र आँखाले काम गर्छ । त्यो पनि आँखाको क्षमता अनुसार कम या वेसी प्रकाश भएमा पनि आँखाले काम गर्दैन । आँखाले देख्ने कुरा पनि अत्यन्त सीमित हुन्छ । सामान्य आँखाले देख्न नसकिने विषय ज्योतिष विज्ञान द्वारा देखिन्छ । जस्तै सत्तरी बर्षको मांछेले देख्ने ( बुझ्ने ) कुरा दश वर्षको बच्चाले देखदैन बुझदैन । यहाँ भौतिक रूपमा बच्चाका आँखा राम्रा भएता पनि सुदूर भविष्यसम्म देख्न बुझ्न सक्ने आँखा सत्तरी बर्षको मान्छेमा नै हुन्छ । यही तेस्रो नेत्रको विशेषता हो । ज्योतिष शास्त्र त्यो भन्दा धेरै माथि छ । सत्तरी बर्षको मान्छेले पनि नदेखे बुझेको विषय ज्योतिष शास्त्रले देखाउँछ । ज्योतिष शास्त्रको महिमा दुइ चारबटा लेखमा पूरा हुन सक्तैन किनकी यो प्रकृतिको भाषा ( Language of nature ) हो । यसको गहनतालाई ध्यानमा राखेर नै दुइ चार लेखमा महिमा पूरा हुन सक्तैन भनिएको हो ।
विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलवर्ट आइन्स्टाइनसंग कसैले प्रश्न गरे what about time Sir ? उनको उत्तर थियो- I don't know about this matter. यसबाट के बुझिन्छ भने आधुनिक विज्ञानले पदार्थको विश्लेषण राम्ररी गरे पनि समय विज्ञानको बारेमा आधुनिक विज्ञानको पहुँच छैन । यसै गरि अलवर्ट आइन्स्टाइनकै अर्को भनाइ पनि मननीय मानिन्छ - आधुनिक विज्ञानको साम्राज्य गणितमा आधारित छ र गणितको आविष्कारक गंगा किनारका ब्राह्मणहरू हुन । त्यसैले सम्पूर्ण वैज्ञानिक चमत्कार जे जति पनि भएका छन ती सबैको श्रेय ( credit ) तिनै गंगा किनारका वैदिक ब्राह्मणहरूलाई नै जान्छ, या दिनुपर्छ । अलवर्ट आइन्स्टाइनको भनाईबाट के स्पस्ट हुन्छ भने ( भास्कराचार्य आदि ) ज्योतिष शास्त्रको अध्येता अनुसंधाताले नै संसारलाई गणितशास्त्र दिएका हुन । त्यसैले ज्योतिष शास्त्र भनेको ग्रह नक्षत्रको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शास्त्रमात्र नभएर आधुनिक विज्ञानको पनि जननी हो । आज भोली या कुनै पनि दिन तपाईलाई राम्रो या नराम्रो के छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर आधुनिक विज्ञानसंग छैन । एक एक दिनको मात्र कुरा हैन बल्की महिना बर्ष या सम्पूर्ण जीवन र जीवनका विभिन्न पक्ष जस्तै स्वास्थ्य शिक्षा सम्पत्ति प्रेम परिवार सन्तान रोग शत्रु मित्र आदि राम्रो नराम्रो हुने कुराको विचार गर्ने र पत्ता लगाउने एकमात्र विज्ञान नै ज्योतिष विज्ञान हो ।
जन्म कुण्डली के हो ?
जन्म समयको ग्रहस्थिति देखाउने तस्वीर नै जन्म कुण्डली हो । Morning shows the day अर्थात् विहानको समय प्रसन्न भए दिनभर प्रसन्न हुने र दुःखी भए दिनभर दुःखी भइने कुरा हामीले दैनन्दिन अनुभव गरेका छौं । मान्छे जन्मदाको समय उसको पृथ्वीमा प्रथम उपस्थित हुँदाको समय के कस्तो छ र त्यसले जीवनमा कुन कुन पक्षमा सफल र कुन कुन पक्षमा असफल बनाउँछ भन्ने कुरा कुण्डलीले स्पस्ट देखाउँछ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार जो व्यक्ति जुन समयमा जन्म्यो त्यस समयमा कुन ग्रह कहाँ के कस्तो अवस्थामा थिए र ती संकेत अनुसार कुन कुन पक्ष कति सबल या निर्बल छन भन्ने कुरा कुण्डलीले देखाउँछ । तिनै ग्रह नक्षत्रले देखाएको संकेत अनुसार व्यक्तिको वस्तुस्थिति या भविष्य कथन सम्भव हुन्छ ।
कुण्डली आँफैमा एउटा विज्ञान हो । कुण्डलीभित्र बाह्र कोठा हुन्छन जो आकाशको प्रतिनिधित्वलाई संकेत गर्छ । आकाशमा सबै ग्रह आ आफनै कक्षमा निरन्तर चलायमान हुन्छन । आकाशको यिनै बाह्र क्षेत्रलाई मेष वृष आदि राशिको नाम दिइएको छ । यी नाम पनि सार्थक छन । यी आकाशीय क्षेत्रमा ग्रहहरू घुम्दै जांदा अनेक प्रकारका चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न हुने गर्छ । एउटै ग्रह भिन्न भिन्न ठाउँमा भिन्न भिन्न प्रकारको गुरुत्वाकर्षणको प्रभावमा पर्छ र भिन्न भिन्न प्रकारको सुखद दुःखद या सम अवस्थाको अनुभव गर्छ र सोही अनुसारको प्रभाव दिन थाल्छ । जस्तै सूर्य ग्रह मेष राशि ( वैशाख महिना ) क्षेत्रमा हुँदा सुख अनुभव गर्छ र त्यसमा रहेर निक़ै राम्रो असर उत्पन्न गर्छ । पृथ्वीमा वैशाख महिनामा सूर्यले राम्रो प्रभाव पारेको हुन्छ । सूर्य आत्मा अर्थात जीवनको कारक हो । सूर्य बिना जीवनको कल्पना असम्भव छ । चैत वैशाखमा वसन्त ऋतुमा जीवन प्रारम्भ हुने हामीलाई अनुभव छँदैछ । यसै गरी पहिलो राशिमा सूर्यले सुखद अनुभव गरे झैं दोस्रो बृष राशिमा चन्द्रमाले सुखद अनुभव गर्छ ।जहाँ सुखद अनुभव गर्छन त्यसको विपरीत सातौं राशिमा दुःखद अनुभव गर्छन । त्यसैले सूर्य मेष राशिमा उँचा र तुला राशिमा नीच अर्थात् नेगेटिव मानिन्छ । चन्द्रमा बृष राशिमा उँचा र वृश्चिक राशिमा नीच मानिन्छ । त्यसै गरि मंगल ग्रह मकर राशिमा उँचा र कर्कट राशिमा नीच मानिन्छ । उँचा हुँदा सुखद अनुभव र सुखद परिणाम दिए झैं नीच हुँदादुखद अनुभव र दुखद परिणाम दिने गर्छन । यी दुइथरि मात्र अवस्था हुँदैन । आफ्नो राशिमा हुँदा शत्रुको राशिमा हुँदा मित्रको राशिमा हुँदा सम सम्बन्ध भएका ग्रहको राशिमा हुँदा सोही अनुसार फरक फरक फल दिने गर्छन । प्रत्यक्ष उपस्थित भएर फल दिए झै दृष्टिले पनि फल फलित हुने गर्छ । सबै ग्रहले आँफु बसेको राशिबाट सातौं राशिमा पूर्ण दृष्टिले हेरेको अर्थात् प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यस बाहेक मंगलले चौथो र आठौंमा, गुरुले पाँचौं र नवौं राशिमा, शनिले तेस्रो र दशौं राशिमा पूर्ण प्रभाव पार्छन । यसैगरी ग्रहका बाल युवा वृद्ध आदि अनेक अवस्था हुने र सोही अनुसार फल दिने गर्छन । यी र यस्तै अनेक अवस्थाको सम्पूर्ण विचार दशा विचार गरेर चिना हेर्ने ज्योतिषीले फल बताउने गर्छन । वर्तमानमा आकाशमा चलिरहेका ग्रहहरूको बस्तुस्थिति, जन्मसमयको ग्रहस्थिति र वर्तमानमा चलेका दशाका आधारमा भविष्यफल भन्ने गरिन्छ जुन अस्सी देखि शय प्रतिशतसम्म मिल्ने गर्छ । यसरी चिना कुण्डली हेरेर जुन जुन विषयमा राम्रो हुने संकेत देखिन्छ ती विषयमा प्रयास गरेमा राम्रो सफलता प्राप्त हुने गर्छ र जुन विषयमा ग्रहको संकेत राम्रो हुँदैन त्यस्ता विषयमा सफल हुन सकिन्न अथवा निक़ै गाह्रो हुन्छ ।
तपाई हाम्रो जीवनमा सजिलै उन्नति प्रगति होस भन्ने छ भने प्रकृतिको भाषालाई बुझ्नुपर्छ । ग्रहहरुको यो सिस्टमलाई नबुझी सुखै छैन, त्यसको संकेतलाई अनुसरण नगरी सुखै छैन । कुनै ज्योतिषी व्यक्ति विशेषले कुनै प्रश्नको उत्तर मिलाएन अथवा भनेक़ो पुगेन भने त्यो त्यही व्यक्तिको कमी कमजोरी मान्नुपर्छ । ज्योतिष शास्त्रको कमी मान्न मिल्दैन । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर नै हाम्रा बाउ बाजेले हज़ारौं वर्षदेखि निरन्तर चिना कुण्डली हेर्ने हेराउने र सोही अनुसार जीवन जिउने अभ्यास गर्दै आएका छन । यसरी ग्रह र तिनिहरूले पार्ने प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान गर्न आज संसारभरिका विश्वविद्यालयमा ज्योतिष शास्त्र पढ़ने पढ़ाउने गरिन्छ । यी र यस्तै अनेक राम्रा पक्ष देखेर नै हाम्रो पात्रोको टीमले ज्योतिष सेवा लिएर उपस्थित भएको हो । आदरणीय मित्र ! ज्योतिषी भनेका life designer हुन । व्यवस्थित बन्न नसकेका हरेक जीवनलाई well manage गर्दै सुन्दर design मा व्यवस्थित गरिदिने भएकाले नै यसलाई वेदका आँखा मानिएको हो । अस्तु ।
- आचार्य चुडामणि पाठक
लेखकले "अध्यात्म विज्ञान" पुस्तक प्रकाशित गर्नु भएको छ (available on Amazon) । उहाँ वैदिक ज्ञान लाई विज्ञान सरह प्रस्तुत गर्न रुचाउनु हुन्छ। आचार्य चुडामणि पाठकसँग ज्योतिषीय परामर्श लिनको लागि नेपाली समय बेलुका ९ बजे देखि १२ बजे सम्म हाम्रो ज्योतिष सेवामा आउनु होला ।